Dongguan Fuya Hardware & Plastic Products Co., Ltd. e guzobere na 2008. Ọ bụ a ụlọ ọrụ tụnyere R&D, imewe, mmepụta na ahịa. Lọ ọrụ ahụ bụ nnukwu azụmaahịa; plastik, ngwaahịa ụlọ, ndị na-eyi akwa, nko ọnụ ụzọ, nko nko, mkpochi, mkpuchi eletriki, mkpuchi ngosi, ntị ntị, ihe mkpuchi fan, wdg. sink, CNC machining nke akụkụ, wdg
Akụrụngwa Fuya nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 setịpụrụ Japan Tsugami na (CNC) igwe ngwụcha ngwanrọ na igwe igwe, nkenke akpaghị aka na akụrụngwa inyeaka. Iji na-agbaso oke nkenke nke nhazi CNC, ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwá ọrụ nyocha dị elu dị ka ihe eji atụ ihe, akụkụ atọ, akụkụ abụọ, onye na-anwale ihe ike, onye na-enyocha infrared automatic, roundness, roughness na na.
Ka ị na-aga n'ihu na-emeziwanye ọrụ injinia ya na ikike ọrụ aka ya, Fuya Hardware na-adabere na mmepụta na njikwa njikwa bara ụba iji mezuo mgbanwe site na nrụpụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na teknụzụ na ngalaba e-commerce, na-esochi usoro akụ na ụba ihe ọmụma na akụ na ụba netwọkụ. , ma gbaa mbọ wuo ụlọ ọrụ teknụzụ. Jiri nwayọ guzobe ókèala mba ụwa dabere na ala China ma gbasaa n'akụkụ ụwa niile. Gbalịsie ike bụrụ onye isi na-ahụ maka mgbanwe ụlọ ọrụ na nwelite na Pearl River Delta. Mepụta evergreen akpata "ogologo oge, kwụsie ike, mmepe, technology na mba"!
Na "magburu onwe ya mma oge ọgbụgba pụtara ìhè ika" dị ka azụmahịa mgbaru ọsọ, nditịm mejuputa ISO9001, 9002 quality asambodo usoro ụkpụrụ. Webata ngwa ọrụ mepụtara site na Germany na Italytali. The ụlọ ọrụ na ngwaahịa bụ nke elu àgwà, ezi aha, na echiche ọrụ, ma merie olu otuto si ahịa n'ụlọ na mba ọzọ ~